Zipt - အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုများနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Zipt - အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုများနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများ
Zipt - အခမဲ့ခေါ်ဆိုမှုများနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများ APK ကို
Zipt မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူသင်၏လက်၏စွန်ပလွံသို့အရည်အသွေးမြင့်အခမဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများစေနိုင်စွမ်းတတ်၏။ အင်တာနက်ကို-enabled မိုဘိုင်းကိရိယာများပေါ်တွင်ရရှိနိုင်, Zipt သင်သွားလေရာရာ၌မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုချိတ်ဆက်သင်သည်စောင့်ရှောက်, သင်သူတို့နှင့်အတူသင်၏အသက်တာ၌ရှိသမျှသောတစ်ခုတည်းသောယခုအချိန်တွင်မျှဝေဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ Zipt ပင်နှေးကွေး 3G ကွန်ရက်များပေါ်တွင်ဿုံအလုပ်လုပ်မည်, Wi-Fi 2G သို့မဟုတ်အခြားမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ကွန်ရက်ရှာဖွေနေအကြောင်းကိုမေ့လျော့။ အဲဒီအစားဆက်ကပ်အပ်နှံ username နဲ့အဆက်အသွယ်စာရင်းရှိခြင်း၏, Zipt သင့်ရဲ့ခေါ်ဆိုမှု ID အဖြစ်သင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုကိုအသုံးပြုသည်နှင့်သင်အလိုအလြောကျသငျသညျဂရုစိုက်လူတိုင်းချိတ်ဆက်နေဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်တွေနဲ့ synchronizes ။
Zipt နှင့်အတူ, သင့်အသက်တာ၌အရေးကြီးဆုံးကလူ့ကိုထိပုတ်ပါကွာအမြဲများမှာ!
။ ZIPT အခမဲ့ ZIPT ခေါ် MESSAGES များ - အခြား Zipt အသုံးပြုသူများအ Calling နှင့်စာပို့လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ သင်လိုအပ်အားလုံးသည်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုဖြစ်ပါတယ်။
။ NO အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအခကြေးငွေ - Zipt သင်တို့ရှိသမျှ Zipt အသုံးပြုသူများအတွက်အခမဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှခွင့်ပြုပါတယ်။ သူတို့အခြားတိုင်းပြည်အတွင်းရောက်နေလျှင်တောင်မှ, Call နှင့်သင့်မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုစာပို့။ သင်သည်မည်သည့်အပိုဝန်ဆောင်ခကောက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ *
။ NO in-app Advertising - သုံးစွဲဖို့သန့်ရှင်းလွယ်ကူသောလျှောက်လွှာကိုစောင့်ရှောက်ရန်အလို့ငှာ, Zipt လုံးဝအခမဲ့ကြော်ငြာများဖြစ်ပါတယ်။
။ NO USERNAME ကလိုအပျ - သင်လျှောက်လွှာကိုအသုံးနိုင်သီးခြားအသုံးပြုသူအမည်ကိုဖန်တီးရန်မလိုပါ။ Zipt ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ရန်သင့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုအသုံးပြုသည်။ Zipt သင်၏နံပါတ်ကိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုပုံသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကသငျသညျခေါ်ဆိုမှုင်သိရကြလိမ့်မည်။
။ မိုဘိုင်းကိရိယာကိုမဆိုအလုပ်လုပ်ပါတယ် - သင်ဟာအင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်နိုင်သောမည်သည့်မိုဘိုင်းကိရိယာပေါ်တွင် Zipt ကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်ရုံသင့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ရန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
။ အလွယ်တကူသင်၏အဆက်အသွယ်အမည်များစာရင်းနှင့် ဆက်စပ်. - Zipt သင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်တွေနဲ့ synchronizes နှင့်သင်ပြီးသားအသုံးပြုကြသည်သောသူတို့အခေါ်စာပို့နိုင်ပါတယ်။
။ Facebook နှင့် Twitter နဲ့လွယ်ကူရှင်းလင်းပူးပေါင်းခြင်း - Zipt သင် Zipt ရန်သင့်ဖေ့ဘုတ်ခ်သူငယ်ချင်းများသည်နှင့် Twitter နောက်လိုက်ဖိတ်ခေါ်ခွင့်ပြု, ဒါကြောင့်သင်အခမဲ့အချင်းချင်းမခေါ်နဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုပေးနိုင်သည်။
။ LOW bandwidth လိုအပ်ချက်များကို - Zipt ပြီးပြည့်စုံခေါ်ဆိုမှုအရည်အသွေးထိန်းသိမ်းထားဖို့မြင့်မားသောအင်တာနက်ကိုမြန်နှုန်းမလိုအပ်ပါဘူး။ အဲဒါကိုတောင် 8G ကွန်ရက်များပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်, ဆိုလိုတာက 2kbps ၏နိမ့်ဆုံးမြန်နှုန်းလိုအပ်ပါသည်။
။ LOW ဒေတာသုံးစွဲမှုနှုန်း - အနိမျ့ bandwidth ကိုလိုအပ်ချက်သင်သည်သင်၏ဖုန်းရဲ့ data တွေကိုအထုပ်ထဲကအများဆုံးလုပ်နိုင်အောင် Zipt ကိုလည်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုစဉ်အတွင်းဝေးလျော့နည်းဒေတာကိုသုံးပါမည်ဟုဆိုလိုသည်။
။ အပိုမရှိအခကြေးငွေ - Zipt ဖုန်းရဲ့အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ကိုအသုံးပြုသည်နှင့်ဒေတာများကသင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုကိုရန်သင့်အားချိတ်ဆက်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်။ သင်ပေးပို့သို့မဟုတ်သင်လုပ်ခေါ်ဆိုသည့်မက်ဆေ့ခ်ျအဘို့အဆိုအပိုဆောင်းကြေးပေးဆောင်ရန်လိုအပ်မည်မဟုတ်ပါ။ *
။ မိုဘိုင်းနှင့်ကြိုးဖုန်းမှစျေးအသက်သာဆုံးခေါ်ဆိုမှုများ - Zipt ထဲကသင်မယုံနိုင်လောက်အောင်အနိမ့်စျေးနှုန်းများများအတွက်ကမ္ဘာပေါ်မှာမည်သည့်အရေအတွက်ကိုမခေါ်နဲ့မက်ဆေ့ခ်ျကိုမှခွင့်ပြုပါတယ်။
။ အခမဲ့ ZIPT OUT မှတ်တမ်း - Facebook နှင့် Twitter မှတဆင့် Zipt အသစ်အသုံးပြုသူများကိုဖိတ်ခေါ်သောအားဖြင့်, သင် Zipt အသုံးမပြုရဲ့မည်သည့်မိုဘိုင်းသို့မဟုတ်ကြိုးဖုန်းအရေအတွက်စျေးပေါအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုအခမဲ့ခရက်ဒစ်ရပါလိမ့်မယ်။
* ဒေတာများကိုစွဲချက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ အသေးစိတျအဘို့သင့်ကိုအင်တာနက်ပံ့ပိုးသူကိုဆက်သွယ်ပါ။
ဝက်ဘ်ဆိုက် - zipt.com
Facebook မှာ - facebook.com/pages/ZipT/315445578617298
တွစ်တာ - twitter.com/ZipT_app
Instagram ကို - instagram.com/zipt_app/
အထီးကျန် AaDiL says:
အောက်တိုဘာလ 9, 2017 မှာ 10: 52 နံနက်